Volkano-ka Krakatoa: astaamaha, samaysanka iyo qaraxyada | Saadaasha Shabakadda
Markii aan tixraacno magaca Krakatoa waxaan ula jeednaa jasiirad fulkaan ah oo ku taal Sunda Strait ee gobolka Lampung, oo u dhexeysa Java iyo Sumatra, Indonesia. Inkasta oo la yiraahdo Volkano-ka Krakatoa, jasiiraddan waxay lahayd 3 koonto oo fulkaano ah. Waxay caan ku noqotay masiibada halista ah ee ay sababtay 1833-kii markii fulkaanaha uu qarxiyay jasiiradda oo dhan isla markaana uu saameeyay gobollada ugu dhow.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa wax walboo aad ubaahantahay inaad ka ogaato asalka, sameynta iyo astaamaha fulkaano Krakatoa.
2 Cudurka Folkaano ee Krakatoa
3 Cimilada, flora iyo fauna
Indooniisiya waa waddan fulkaane aad u sarreeya maxaa yeelay waxay leedahay ku dhowaad 130 fulkaano firfircoon, in ka badan waddamada kale ee adduunka. Sidaa darteed, ma aha wax aan caadi ahayn in dadka deegaanku ay goob joog u ahaadaan qaraxyo iyo qaraxyo xooggooda kala duwan. Fulkaanaha Krakatoa waa stratovolcano, oo ka kooban lava, dambas, boombo, iyo waxyaabo kale oo pyroclastic ah.
Jasiiraddan ayaa dhererkeedu yahay 9 kiilomitir, ballackeeduna waa 5 kiiloomitir, bedkeeduna waa qiyaastii 28 kiiloomitir oo laba jibbaaran. Lakata koonfurta waxay ka sarreysaa heerka badda 813-820 mitir; Pebu Atan ee waqooyiga waxay ka sarreysaa heerka badda 120 mitir iyo Danan bartamaha waxay ka sarreysaa heerka badda 445-450 mitir.
Maaddaama Krakatoa ay tahay stratovolcano oo volcano-ka noocan ah waxaa badanaa laga helaa aagagga hoose, waxay ku taalaa saxanka Eurasia iyo saxanka Indo-Australia. Aagga hoos-u-dhigga waa barta ay ku burbursan tahay qolofta badda maxaa yeelay qulqulka qulqulka ayaa isku soo ururaya halkaas. Natiijo ahaan, hal saxan oo farsamo ayaa ku hoos hoosta mid kale.
Ka hor qaraxii fulkaanaha 1883dii, Krakatoa waxay ka mid ahayd koox yar oo jasiirado u dhow ah: Lang, Venlaten, iyo Poolsche Hoed islet, iyo jasiirado kale oo yaryar. Kuwani waa dhammaan hadhaagii hore ee fulkaanaha baaxadda weynaa, ee dhacay waqti ka mid ah xilligii taariikhda kahor waxayna sameysay god dherer dheer oo 7 kiiloomitir ah ama niyad jab dhexdooda ah. Hadhaagii qarxinta fulkaanaha qadiimiga ah waxay bilaabeen inay midoobaan, sanado badan ka dib, firfircoonida taarikada teknoolajiyada awgeed, koonooyinka ayaa isku xirmay si ay u sameeyaan Jasiiradda Krakatoa.
Cudurka Folkaano ee Krakatoa
Fulkaanaha Krakatoa waxaa loo yaqaan mid ka mid ah fulkaanaha ugu waxyeellada badnaa ee diiwaanka lagu hayo. Xaqiiqdii, Fulkaanaha gogosha leh waxaa lagu gartaa qaraxyada qarxa maxaa yeelay laafyadooda waxaa kujira xaddi badan oo ah xamaasad leh andesite iyo dacite, taas oo ka dhigaysa mid aad u jilicsan oo sababi karta cadaadiska gaaska inuu aad u sarreeyo heerar aad u sarreeya.
Ma jiro diiwaan cad oo ku saabsan qaraxyada fulkaanaha aad u duqoobay. Sanadkii 416 d. C., tan waxaa lagu sheegay qoraal gacmeedka "Pararaton ama Book of Kings" oo ku saabsan taariikhda boqorrada Bariga Java. C. Waxaa jira qarax aan weli la xaqiijin taariikhda. Sida la filayo, AD 535. C. Qaraxa wuxuu dhacay dhowr bilood, kaasoo saameyn weyn ku yeeshay cimilada Waqooyiga Hemisphere.
Waxay u muuqataa inay jireen laba qarax 1681, kuwaas oo la arkay oo lagu qoray diiwaanka badmareenada Holland John W. Vogel iyo Elias Hesse. Sannadaha soosocda, dhaqdhaqaaqa volcano ayaa wali kacsanaa, laakiin kadib wuu yaraaday kamana muuqan wax khatar ku ah dadka deegaanka. Xitaa horaantii 1880-yadii, volcano-ka Krakatoa waxaa loo tixgeliyey inuu dabar go'ay maxaa yeelay qaraxii ugu weynaa ee ugu dambeeyay wuxuu dhacay 1681. Si kastaba ha noqotee, xaaladdan waxay ku dhowdahay inay isbeddesho
Bishii Maajo 20, 1883, Perbuatan wuxuu bilaabay inuu soo daayo boodh iyo dambas. Subaxaas, kabtanka markabka Jarmalka ee Elizabeth ayaa soo wariyay inuu hayo arkay daruuro qiyaastii 9-11 kiiloo mitir ah oo ku yaal jasiiradda Krakatoa ee aan la degganeyn. Bartamihii Juun, godka Perbuatan ayaa ku sigtay inuu burburo. Hawsha ma joogsan, laakiin bishii Ogos waxay heshay miisaan baaxad leh.
Qiyaastii 1-dii duhurnimo maalintii Axadda, Ogosto 26, Krakatoa waxay la kulantay qaraxkeedii ugu horreeyay ee weynaa, maaddaama qaraxii dhaga weynaa uu abuuray daruur qashin ahWaxay ka kacday 25 kiiloomitir jasiiradda waxayna ku fiday woqooyiga illaa ay ka gaadhay ugu yaraan 36 kilomitir oo dherer ah. Ugu xumaa wuxuu dhacay maalinta ku xigta: cadaadiska uruursan awgood, waxaa jiray 4 qarax subaxnimadii, kuwaas oo ku sigtay inay qarxiyaan jasiiradda. Bishii Ogosto 1883, waxaa dhacay afar qarax oo gebi ahaanba baabi’iyey jasiiradda.
Sawaxanka la soo saaray waxaa loo tixgeliyey dhawaqii ugu weynaa taariikhda wuxuuna jabiyey dhegaha dadka ugu dhow aagga. Dhawaqan waxaa laga maqlay meel qiyaastii 3.110 kilomitir u jirta Perth, Western Australia iyo Mauritius. Qarixii xooganaa awgiis, tsunami ayaa dhacday, mowjadaha waxay gaareen dherer dhan 40 mitir waxayna u dhaqaaqeen dhanka xeebta galbeed ee Sumatra, West Java iyo jasiiradaha ku dhow xawaare gaaraya ilaa 1.120 kilomitir saacadii. Tirada dhimashada ayaa kor u dhaaftay 36.000.
Boorkii iyo gaaskii ay sii daayeen volcano-ka Krakatoa sanadkii 1883 ayaa jawiga ku sii jiray illaa 3 sano. Fulkaanaha waa la waayey oo waxaa la abuuray god cusub, illaa 1927-dii ayayna ahayn aagga oo ay ka muuqatay astaamo dhaqdhaqaaq fulkaaneed. Jasiirad fulkaaneed cusub ayaa soo muuqatay 1930-kii markii dambena waxaa loo bixiyay Anak Krakatoa (waa wiilka Krakatoa). Jasiiraddu way sii korortaa markay sanadaha sii socdaan.
Cimilada, flora iyo fauna
Jasiiraddu waxay leedahay cimilo diiran oo qoyan oo leh heerkul u dhexeeya 26 ° iyo 27 ° Celsius. Duufaantii weyneyd ayaa baabi'isay dhammaan noloshii aagga waxayna dib u soo ifbaxay 1927 sida volcano ee Anak Krakatoa. Laakiin guud ahaan, waxaa Indonesia ka jira 40.000 nooc oo dhir ah, oo ay ku jiraan 3.000 oo geed iyo 5.000 orchids. Waqooyiga hoose ee gobolka waxaa ku badan dhirta keymaha, iyo koonfurta hoose ee hoose waxaa ku badan mangroves iyo baabacooyinka.
Fauna waxay ka kooban tahay noocyo ka kala socda gobollada kulaylaha ah ee Afrika iyo Ameerika, laakiin jasiirad kasta waxay leedahay noocyo kala duwan. Orangutans waxaa kaliya lagu arki karaa Sumatra iyo Borneo; shabeellada ku yaal Sumatra iyo Java, bison iyo maroodiyaasha Java iyo Borneo, kaliya Tapir iyo siamang ayaa ku yaal Sumatra.
Sidaad arki karto, waxaa jira fulkaano si dhab ah u calaamadeeyay taariikh kahor iyo kadib taariikhda. Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto fulkaanaha Krakatoa iyo astaamaheeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Volkano Krakatoa